I-WTO: asikho isivumelwano sokuqoka uMqondisi-wethutyana wesikhashana - Jeune Afrique - teles
Amalungu eWorld Trade Organisation (WTO) ahlulekile ukuvuma ukuqoka umqondisi wesikhashana wesikhashana ngaphambi kokuqokwa kwalowo obezongena esikhundleni sikaRoberto Azevedo waseBrazil. Isikhundla esiphikiswe ikakhulukazi ngabantu abathathu base-Afrika.
"Kwakungekho ukuvumelana," kusho okhulumela iWCA uKeith Rockwell, wengeza ngokuthi umphathi ophumayo wale nhlangano "uphoxekile".
Amalungu alesi sikhungo kumele aqoke omunye wabaqondisi abane be-WTO ukuphatha ibhizinisi losuku izinyanga ezimbalwa, kepha ngokusho komthombo ongumbhishobhi, i-United States yafuna ukuqokwa kwesekela likamqondisi wenhlangano yezwe laseMelika u-Alan Wolff.
Wenqaba "ukuqagela" izimbangela zesehluleki, uKeith Rockwell uvumile ukuthi "umbuzo wobuzwe" ubungenye yezinto ezaphakanyiswa, njengoba kwaba "nokuhlangenwe nakho". "Ukuhweba kuyindaba yezepolitiki," esho, ngenkathi egcizelela ukuthi ukungabi bikho komqondisi wesikhashana "akunankinga enkulu".
Ukungatholakali komqondisi jikelele wesikhashana kungabeka "eminye imibuzo enamehlo" ngokusemthethweni, uvumile, ngenkathi egcizelela ukuthi kwakuyisikhathi "sezinyanga ezimbili kuya kwezintathu".
Inqubo yokuqoka ukuqokelwa isikhundla sikaRoberto Azevedo ngempela ingenxa yokuqalisa ngoSepthemba futhi ingaqhubeka kuze kube nguNovemba.
Abathathu abazongenela ukhetho
Abayisishiyagalombili abamele ukhetho bayabandakanyeka, kufaka phakathi abantu abathathu base-Afrika: Nigerian Ngozi Okonjo-Iweala, usomnotho wezentuthuko kanye nalowo owayenguNgqongqoshe Wezimali; Kenyan Amina Mohamed, uNgqongqoshe Wezamasiko Nezemidlalo wamanje owayenguNgqongqoshe Wezobulungiswa, Wezangaphandle kanye nowezemfundo; waseGibhithe u-Abdel Hamid Mamdouh, isisebenzi sikahulumeni esezingeni eliphezulu esachitha ingxenye yomsebenzi waso ngaphakathi kwe-WTO.
"Okudidayo kubangelwa ukuthi isivumelwano asikwenzekanga lapho kwenziwa khona inqubo yezokuphatha," kusho uKeith Rockwell.
URoberto Azevedo umemezele maphakathi noMeyi kumangaze wonke umuntu ukuthi uzoshiya isikhundla sakhe ekupheleni kuka-Agasti, unyaka ngaphambi kokuphela kwegunya lakhe, ngenxa "yezizathu zomndeni". Ngemuva kokusuka kwakhe, omunye wabaqondisi abane be-WTO - waseMelika, ongumJalimane, ongumNigerian kanye noChina - wayezohola le nhlangano ngenkathi elindele ukuthi kuqokwe ozongena esikhundleni waseBrazil.
Ukuhlaselwa kabusha neWashington
Iningi lamaJalimane uKarl Brauner lahanjelwa iningi lamalungu. Kepha, ngokusho komthombo ongumbhishobhi, abantu baseMelika, ngokudla ubhedu ne-WTO, "balubambile" udaba ngalolu daba futhi bafuna ukuthi kuqokwe ozakwabo.
"Lo mbono wokuthi iMelika idala umnqamulajuqu ingamanga," kusho uzwilakhe omkhulu ngoLwesine kusihlwa uma engaziwa. "Akekho othola lo msebenzi ngokuzenzakalelayo."
IWashington isabise ngokuthi izoyishiya i-WTO, yona efuna ukuthi yenziwe ngokweqile, futhi kusukela ngoDisemba ikhubazekile inkantolo yezikhalazo yophiko lwayo lokuxazulula izingxabano (i-ORD).
Ngaphakathi kokuwohloka komnotho wembulunga yonke okubangelwe ubhubhane lwe-Covid-19, amaphrojekthi amaningi amakhulu alindele umphathi we-WTO wesikhathi esizayo: lungiselela ingqungquthela yabongqongqoshe okufanele yenziwe ngo-2021, inikeze izingxoxo ezingxoxweni ezinyathela phansi nezisusa imbuthano izingxabano phakathi kwale nhlangano neMelika.
Ngemuva kwe-United States, United Kingdom ne-Australia, ...
Hinda Wafy, Umsunguli Womcimbi Womsunguli we- "Kanye Kwaba Isikhathi" ngo…
TELES RELAY 17784 izikhala 1 amazwana
Izinsuku zemibukiso emisha nebuyayo - abantu
Ngemuva kweMelika, i-United Kingdom ne-Australia, i-India iyingxenye ...
Okwangaphambilini Olandelayo 1 kwezingu-47